Somaliland: Sheekh Aadan-Siiro Oo Sheegay In Ganacsato Ku Tartamayso Inay Iibsadaan Dhulka Laynka Booliiska Ee Hargeysa - Wargane News
Home English News Somaliland: Sheekh Aadan-Siiro Oo Sheegay In Ganacsato Ku Tartamayso Inay Iibsadaan Dhulka...
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Shalay kaga hadlay dhibaato ka jirta Dekedda Magaalada Berbera oo Xukuumadda Somalilad ku wareejisay Shirkadda DP World.
Ugu dambayn, Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud wuxuu ka digay in Cid gaar ah laga iibiyo Dhulka Laynka Bileyska Hargeysa oo uu sheegay in Ganacsato ku tartamayaan si ay u iibsadaan, “Mid baan idiin sheegayaa, Laynka Booliiska (Xaafadda Laynta Booliska) waxa bannaan 200 mitir iyo 150 Mitir, Dhulkaa Maanta bannaan haddii la qiimeeyo wuxuu noqonayaa Konton Milyan oo Dollar, Waayo? Mitirka laba Jibbaaran eek u yaalla Badhtamaha Hargeysa qiimihiisu waa laba Kun oo Dollar, marka loo eego Guryaha ka sii jeeda, kuwa ku soo jeeda ee Badhtamaha Magaalada ku yaalla sidii Dhaxalka lagu sameeyay (Sidii lagu qiimeeyay). Dhibaatada jirta ee Waddooyinkii Magaalada xidhay waa Basas, meel alaale iyo meel laga maro Bas ayaa la la’yahay.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey oo soo jeediyey Talooyin “Waxaanu kula talinaynaa Golaha Deegaanka oo aan Anigu qabo inay yar seexdeen, waxaanu kula talinaynaa Xukuumadda, waar Dhulkaa Laynka Booliiska aad baa loo hadal-hayaa, oo waxa ku tartamaya Nimankii Beystaynada haystay, ee Afar Arrimood mid hala sameeyo haddii Garasho iyo dareen jiro. Waata koowaad ee Basaska ha la inagaga ururiyo meeshaas, oo Basaskaa inna wareeriyey ee Afarta Jahaba ha uga baxaan, haddii taa la yeeli waayo ha laga dhigo meel baabuurta la dhigto oo Gaadhi walba Saacaddii kun Shilin laga qaado, oo noqoto dakhli Dadka u soo kordhay. Haddii taa la yeeli waayo hala dhigo Qaybta labaad ee Jaamacadda Hargeysa, maaddaama oo Jaamacadda Hargeysa innagu yar tahay, haddii taa la yeeli-waayo Cisbitaalka guud ee Hargeysa oo la dhisay 1945-kii, waxna aan lagu kordhin, innaguna yar Qaybtiisii labaad ha laga dhigo Laynka Booliiska ee Hargeysa. Qolada meesha joogta waxaanu leenahay in badan baynu wada-hadalnay ee Saddexdaa bilood ee (Idiin hadhay) u kaadiya oo meeshaa isha ku haya, wax badan bay Ummadda u taraysaa.”